Tsia, Greta dia tsy ny Antikristy | Apg29
Tsia, Greta dia tsy ny Antikristy
Efa mpamaky iray mailaka nalefa ho any amiko amin'izay itoerako Manontany tena ny mpanoratra na ny 16 taona, mafana fo momba ny tontolo iainana Greta Thunberg Ny antikristy.
Namaky teo aloha aho androany tao amin'ny gazety ny andro fa nisy olona nampitaha ny hetsika amin'ny toetr'andro hetsika fifohazana. Fa ny fifohazana hetsika mahazo fanantenana, izay tsy mahazo ao amin'ny toetr'andro hetsika.
Efa mpamaky iray mailaka nalefa ho any amiko amin'izay itoerako Manontany tena ny mpanoratra na ny 16 taona, mafana fo momba ny tontolo iainana Greta Thunberg Ny antikristy. To io fanontaniana io avy hatrany no afaka mamaly:
"Tsia, Greta Thunberg Tsy ny antikristy."
Greta dia vehivavy. Milaza ny Baiboly fa ny Antikristy dia olona, ​​toy izany koa ny sahoan-dresaka milatsaka avy hatrany. Tsy mifanaraka amin'ny Baiboly.
2 Tes 2: 3 . Aoka tsy hisy hamitaka anareo na amin'inona na amin'inona. Fa izany andro izany dia tsy, raha tsy an-efitra efa natao, dia ny lehilahy ny ota, fahaverezana zanaka [izany hoe ny olona], efa naseho.
Ny iray dia tsy tokony mitsikera
Mazava ho azy fa tsy misy mpamaky no mamoaka mailaka. Ankoatra mejlets votoaty dia araka ny Soratra Masina, Izaho koa mba ta ho lynched. Ary ny farany dia zavatra hafahafa. Dia toa tsy hitsikera ny Greta Thunberg.
Novakiko fa ny baolina kitra mpanazatra adala izay nilaza zavatra taminy ankehitriny hahazo voaroaka . Antoka, dia fiteny tsy manara-penitra, fa ianao mahalala ny zavatra tiako holazaina. Taloha, efa nahita horonantsary avy amin'ny American fahitalavitra, mino aho fa, izay nitsikera ny 16 taona zazavavy izay nilaza avy hatrany eny amin'ny alalan'ny olon-kafa ny hoe:
"Ahoana no sahy hanakiana ny ankizy iray ianao, ianao no lehilahy efa lehibe?!"
Izy dia tsy ny ankizy iray, nefa izy ihany koa dia manana miaty filazalazana telo, izay efa namaky teo aloha tao amin'ny Wikipedia , fa ankehitriny dia milaza fa izy fotsiny nanana "fahaketrahana mafy sy ny fihetseham-po amin'ny zava-poana za-draharaha", ary nanapa-kevitra ny 2018 ", mba fa tsy latsaka niverina ho ketraka, dia midira ao asa. "
Raha mitsikera Greta azo voampanga ho mitsikera ny ankizy marary. Amin'izany koa no nanakana ny endrika tsikera manohitra ny hetsika manodidina Greta Thunberg.
Mazava ho azy fa tsy izy izay nanao fa izy no ho tsara fantatra, nefa bokomliggande tafika sy ara-toekarena ny tombontsoa.
Tsy mitsikera Greta, izy dia zaza - ary sarobidy olombelona - izay mila Jesoa Kristy. Inona no fiantraikany ratsy amin'ny fototra mahaliana sy ny hery. Ny fotoana voalohany nahita Greta Thunberg, tezitra avy hatrany aho.
Ary Greta tsy lasa lehibe nefa dia naneho hevitra toy izany. Tena hafahafa ny haino aman-jery rehetra ao aoriana, ary mifanaraka niakatra nankany aminy. Ary noho izany antony izany dia tokony samy hahatakatra fa misy zavatra diso.
Na ny vavy 13 taona, izay Greta amin'ny Instagram , nihevitra ny Firenena Mikambana kabarin'i hosoka , ka niteny tamiko izy tena tsitrapo ho ahy raha tsy mbola fotoana milaza na inona na inona.
Ary ireo ao ambadiky ny Greta Thunberg dia marani-tsaina rehefa avy no naniraka azy fotsiny satria tsy afaka mitsikera ny zaza marary!
Ary izy teo ambonin'ny zavatra rehetra mba hahazo ny Loka Nobel Fandriampahalemana tokony, indrindra mandre fa amin'ny hosoka. Filoha lefitra teo aloha sy ny toetrandro mafana fo Al Gore, nahazo ny loka ho an'ny fanadihadiana nataony. Efa namaky fa ny filazana mialoha ao amin'ny sarimihetsika dia lainga, fa tsy ho tanteraka .
Amin'ny toe-javatra toy izany lazainao fa Hianao irery ihany no folo taona izay mba hamonjy ny planeta. Toy izany koa, hoy Greta sy ny ankizy hafa ny teo aloha efa nilaza toy izany koa. Ary izany dia nandritra ny 20 - 30 taona lasa izay !
Tany Tsy handeha eo ambany
Tany tsy hita folo taona - fa tsy 20 na 30 taona. Ary ny mpaminany rehetra ny loza izay tonga miaraka amin'ny hafatra toy izany dia sandoka. Voalohany, tsy maintsy ho avy indray i Jesosy, dia hiverina ho any Jerosalema eto an-tany!
Raha ny tany lasa ambany, dia ny tsy Jesosy tany mba hiverina any. Noho izany, takatsika fa izany karazana faminaniana Olona ny Fara Andro dia diso.
Fa rehefa i Jesosy no nanjaka teto an-tany mandritra ny arivo taona taorian'ny niverenany, dia izany no ho lanitra vaovao sy tany vaovao! Fa tsy hisy fandringanana - dia ho fahaterahana indray.
Olona iray mihitsy aza voasoratra ao amin'ny Fiangonana gazety Greta Thunberg dia mpaminany . No, dia tsy misy mpaminany. Raha izy dia mbola ho mpaminany - dia izy no diso iray. Ny mpaminany maminany fanantenana an 'i Jesoa Kristy, fa tsy toy izany ihany va hafatra tahaka Greta izay tsy manana fanantenana sy famonjena.
Hoy ny Baiboly:
Ohabolana 23:18: Azo antoka fa toy ny hoavy, ary ny fanantenana dia tsy ho foana.
Jeremia 29: 1: Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo aho fa, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo hanana ny hoavinareo sy hanana fanantenana.
Ohabolana 24:14: Toy izany fahalalana sy ny fahendrena ho an'ny fanahinao. Raha nahita azy, manana hoavy, ary ny fanantenana dia tsy ho foana.
Jeremia 31: 1: Ary misy fanantenana ho anao any amparany, hoy Jehovah. Ny zaza dia hiverina ho any amin'ny taniny.
Namaky teo aloha aho androany tao amin'ny gazety ny andro fa nisy olona nampitaha ny hetsika amin'ny toetr'andro fifohazana hetsika . Fa tamin'ny hetsika fifohazana kristianina manana an'i Jesosy ao amin'ny foibe mba hahazo fanantenana, izay tsy mahazo ao amin'ny toetr'andro hetsika.
Fa ny hetsika toetr'andro lasa fivavahana. Hitako lahatsary tao amin'ny YouTube mitondra ny lohateny hoe: " Green Fifohazana | toetrandro vaovao fivavahana ". Lars Bern Swebb fahitalavitra antso na dia ny toetr'andro Greta Thunberg mihetsika ny Olona ny Fara Andro sekta . Ao amin'ny sekta, fantatsika fa tsy maintsy ny olona sy ny mijaly, fa an'i Jesoa Kristy, ny olona no hafahana.
Raha hiverina any am-piandohan'ny lahatsoratra ity, mazava ho azy, dia tsy Greta Thunberg antikristy. Misy, mamaky mailaka printy be loatra. Ao amin'ny mailaka Manainga toy ny hatramin'ny farany Greta anarana dia 666 ary ny loko maitso dia toy ny silamo.
Fa amin'ny lafiny iray hafa dia afaka ny tontolo iainana hetsika ho ampahany amin'ny fandefasana ny antikristy. Misy hery matanjaka ao ambadiky ny hetsika eran-tontolo iainana izay mety amin'ny andro ho avy Antikristy dia teo ambonin'ny seza fiandrianana. Air hetsika dia tsy tanteraka tsy manan-tsiny. Tamin'izany rehetra izany, dia mety ho nampiasaina be ny olona, ​​ary ho ao amin'ny tsy matoky pawns lalao.
Nanova ny Order dikany
Izaho koa mba ta milaza mikasika ny fomba hanome ny heviny teny hafa. Indraindray aho namaky fa Greta "fampianarana fitokonana" rehefa nisy fanontaniana ny sekoly fitokonana. Fa ahoana no mamely am-pianarana izy any amin'ny firenena hafa, toy ny United States?
Na antsoina hoe ny "fitokonana" na "fitokonana toetr'andro". Tsy misy resaka vitsivitsy fitokonana, saingy fihetsiketsehana sy ny fampielezan-kevitra. Tokony hiantso ny zavatra ho inona izany. Fa toy izany no nafafiny hevitra sy ny hevitra ao amin'ny sain'ny olona mba hitarika azy ireo ao amin'ny tari-dalana sasany.
Mangataha Greta Thunberg sy mivavaka ho an'ny rehetra ny olon-kafa izay tsy manana fanantenana. Mivavaha mba evanjelista sy ny mpanompo hafa 'ny Tompo dia haniraka azy ireo mba handre ny hafatra be voninahitra' ny Tompo Jesoa Kristy ka dia manaiky Azy mba ho voavonjy!
Matio 9:38 . Koa mivavaka amin'ny Tompo mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.
Any ho any koa aho namaky fa ny solontenan'ny kristianina, mino aho fa ny mpisorona, nilaza fa ny olana lehibe indrindra ananantsika amin'izao fotoana izao dia ny toetr'andro na ny tontolo iainana. Tsia, tsy ny tena olana. Ny tena olana dia ny hoe mila olona hanaiky an'i Jesosy ary ho voavonjy.